श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालले कति खटपट ल्याउँछ ? – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : ४ असार २०७७, बिहीबार ११:२७ June 18, 2020
जब दम्पतीबीच सम्वाद हुन छाड्छ वा सम्वादको वातावरण बिथोलिन्छ, तब स–साना असमझदारी बढ्छ । स(साना समस्याहरूको जन्म हुन्छ । त्यही सानो कुरा बिस्तारै हुर्कन्छ । यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यसले श्रीमान्(श्रीमतीबीच शंका–उपशंका पैदा हुन्छ । त्यसपछि एकअर्कामा असमझदारी बढ्छ । मनमुटाव हुन्छ । ठाकठुक पर्छ ।
निश्चय पनि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम चलाउँदैमा त्यस्तो हुँदैन । तर जड त्यही हो । जब तपाईंको लगाव सामाजिक सञ्जालमा बढ्न थाल्छ, तपाईं भर्चुअल संसारमा हराउन थाल्नुहुन्छ । नयाँ–नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्छ । नयाँ साथी–सर्कलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ भने तपाईं वास्तविक धरातलमा रहन सक्नुहुन्न ।
सामाजिक सञ्जालमा हामी यति धेरै लिप्त हुन थालेका छौं कि पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरू ओझेल पर्न थालेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भइरहँदा दम्पतीबीचको सम्वाद टुटेको छ। स्वभावैले मानिसलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ । हातमा स्मार्टफोन हुँदा र फेसबुक चलाइरहँदा घरायसी कुरा गर्न कसरी जाँगर चल्छ ?
हामी सजिलो खोज्छौं, रमाइलो खोज्छौं । त्यही कारण त श्रीमती–श्रीमान् एकै ठाउँमा भएर पनि नभएजस्तो हुन्छ । दुवैको उपस्थिति र सामिप्यता एकअर्काले महसुस नै गर्दैनन् । न उनीहरूबीच घरायसी कुराकानी हुन्छ । न प्रेमिल संवाद नै ।
यसरी सामाजिक सञ्जालमा फसेर दम्पतीले आसपी सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउँछ । अर्कोतिर समस्या जटिल छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण अहिले सम्बन्धविच्छेदको घटना बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भएपछि घरको सामान्य कामधन्दा नै प्रभावित भएको छ ।
छोराछोरी बिचल्लीमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको फन्दामा परेर विवाहेतर सम्बन्ध स्थापित हुने आशंका पनि प्रवल हुँदै गएको छ । क्षणिक रुपमा मनोरञ्जन लिने हेतुले जोडिएका कतिपय सम्बन्धहरू बिस्तारै जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसले अन्ततः दम्पतीबीच संशय पैदा गर्ने मात्र होइन, कलहको बिउ नै रोप्ने गरेका छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले दम्पतीमा विकृति भित्रिएको छ ।
कतिपय श्रीमान् श्रीमतीको झगडा सामाजिक सञ्जालकै निहुँमा हुने गर्छ । पासवर्डको विषयमा झगडा भएर दाम्पत्य सम्बन्ध टुट्न पुगेको घटना पनि समाजमा भेट्न सकिन्छ । अहिले दम्पतीबीचको सम्बन्धविच्छेदको घटना कहाली लाग्दोगरी बढेको छ । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल भएको छ । अनलाइनखबरबाट
अछाममा आज एकै दिन २९ जनामा कोरोना संक्रणको पुष्टि